किरण केसी | २०७३ जेष्ठ २८ शुक्रबार 9098 पटक पढिएको
प्रेमिल, रोमान्टिक र लोभलाग्दो भयो
विवाहपछि हनिमुन जानुपर्छ रे भन्ने कुरा कतैकतै सुनिएको थियो होला । तर, हनिमुन अहिलेजस्तो चल्तीको विषय थिएन र खल्तीमा पैसा पनि थिएन । त्यसैले हनिमुन घरमै मनाइयो ।
१९ वर्षको उमेरमा २०३२ साल फागुन २२ गते मेरो बिहे भएको हो । सुहागरात घरमै मनाइयो । बिहेपछि के के भयो भनेर सबै भन्ने कुरा त भएन तर हामीबीचमा जे जस्तो भयो सबैकुरा एकदमै प्रेमिल, रोमान्टिक र लोभलाग्दो किसिमको भयो ।
४१ वर्षअघिको कुरा नातागोता इस्टमित्रले खोजिदिएकै केटी बिहे गर्ने चलन थियो । मेरो विवाह पहिले एरेन्ज त्यसपछि लभ हो । विवाहपछि हाम्रो यस्तो लभ प¥यो कि अहिलेसम्म त्यो लभमा कुनै अवरोह आएको छैन ।
हामीबीच एकदमै डिप लभ छ । मेरी श्रीमती सीता केसी मेरो लागि आदरणीय, पुजनीय र ढोगनीय छिन् । मेरो काम, करिअर, व्यवहार कुनै कुरामा पनि ठेस पुगेको छैन । ढिलो जाँदा किन ढिला आइस् ? अहिले कहाँ के गर्दैछस् ? बिहान खल्तीमा १५ हजार रुपैयाँ थियो अहिले खोइ ?
यस्ता प्रश्न मैले कहिल्यै सुनेको छैन । उनको मप्रतिको विश्वास धेरै छ । त्यस्तो जीवनसाथीप्रति बेइमानी गर्ने कुरा म सोच्न पनि सक्दिनँ । त्यसैले अहिलेसम्म हाम्रो डिप लभ र हनिमुन जारी छ । हामी समय मिलाएर घुम्न जान्छौं, कार्यक्रमको सिलसिलामा देश र विदेशका विभिन्न ठाउँमा पुगेका छौं । अब अमेरिका, क्यानडा र रुस जाने सोचाइ छ । समय मिलाएर उनलाई पनि घुमाउन लैजान्छु ।
हनिमुनलाई हाम्रो संस्कार र संस्कृति होइन पनि भनिन्छ तर जे भए पनि मलाईचाहिँ मन पर्छ । एरेन्ज विवाहमा त यो झन् महत्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ । हामीले घरैमा हनिमुन मनाएर नै हाम्रो जीवन सुखी छ ।
मलाई भ्यालेन्टाइन डे पनि मन पर्छ । संस्कृति जहाँको भए पनि यो त प्रेमका लागि हो नि । यी दिनलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
भ्यालेन्टाइन डेमा उनले मलाई मन पर्ने टीसर्ट, सेन्टजस्ता कुरा उपहार दिन्छिन् र मीठा खानेकुरा खुवाउँछिन् । म पनि औंठी, टपजस्ता कुरा उनलाई उपहार दिन्छु ।
गत वर्ष मेरो छोराको विवाह भयो । खल्तीमा अलिअलि पैसा पनि थियो । आफू हनिमुन जान नपाए पनि उनीहरूलाई हनिमुन पठाएँ ।
विवाहलगत्तै उनीहरूलाई सिंगापुर र मलेसियाको हनिमुन प्याकेज गिफ्ट दिएँ । त्यहाँ उनीहरू आठ दिन बिताएर फर्किए । पोखरा, जोमसोम, धुलिखेल पनि घुमे ।
हामीले अहिलेजसरी मनाउन नसके पनि हनिमुन समयको माग भएकाले घाँटी हेरेर हाड निलौं भनेजस्तै गच्छेअनुसार मनाउनुपर्छ । त्यही भएर छोराबुहारीलाई पनि हनिमुन मनाउन प्रोत्साहित गरेको हुँ ।